Calculator nokufakwa 1
I ububanzi we valve, mm
The ubude izinduku, amamitha
Intengo ton ngalinye
Calculator ukuqinisa 2
Ingqikithi yesisindo sezinto valve, kg
Izindleko ton ngalinye
It sinquma isisindo ingqikithi ukuqinisa, umthamo yayo inani, isisindo imitha elilodwa kanye stem valve.
The ububanzi eyaziwa futhi ubude nokuqiniswa.
Calculator nokufakwa 2
Bala ubude ukuqinisa, ububanzi bayo inani ukuqinisa imigoqo, isisindo elilodwa kanye nenduku eyodwa.
Kusukela ububanzi eyaziwa futhi isisindo isamba valve.
Ukubala kusekelwe isisindo eyodwa cubic meter steel 7850 kg.
Ukubalwa of armature for ukwakhiwa kwendlu
Uma ukwakha indlu kubaluleke kakhulu ukubala inani ukuqinisa isisekelo. Ukuze wenze lokhu kuzosiza Uhlelo lwethu. Ukusebenzisa valve wokubala kungaba, azi isisindo futhi ubude induku ukwazi isisindo ingqikithi udinga ukuqinisa, noma inani elidingekayo izinduku kanye ubude bazo jikelele. Lezi idatha kuzosiza ngokushesha futhi kalula bala inani ukuqinisa edingekayo ukwenza umsebenzi wakho.
Ukubalwa of nokufakwa for izinhlobo ezahlukene izisekelo
Ukuze abale valve kumelwe sazi uhlobo isisekelo nendlu. Lapha, Kunezinhlobo ezimbili ezivamile. Lokhu setshe futhi strip izisekelo.
Nokufakwa for setshe isisekelo
Setshe isisekelo isetshenziswa kuphi on ugonyuluka nenhlabathi siyadingeka ukuze ufake kanzima indlu ukhonkolo noma izitini kanye mass ophahleni enkulu ukhonkolo. Kulokhu isisekelo kudinga nokuqiniswa. It is ezenziwe ngamaqembu amabili, ngayinye esakhiwa amabili zamatshe izinduku wahlela perpendicular nomunye.
Cabanga sibalo ukuqinisa for slabs, ubude eceleni okuyinto 5 amamitha. Izinduku Gcizelela ezibekwe kude ka-20 cm ezivela nomunye. Ngenxa yalokho, Ngakolunye uhlangothi kwakudinga 25 cores. Ngesikhathi emaphethelweni izikhonkwane plate kungukuthi ibekwe ke, kuba 23.
Manje, azi inani izinduku, ubude bazo kungaba ibalwe. Kufanele kuqashelwe ukuthi izinduku valve akufanele ukufinyelela imiphetho 20 cm, futhi, ngenxa yalokho, ngokusekelwe ubude plate, ubude stem ngalinye kuyoba 460 cm. Ungqimba transverse, inqobo ukuthi plate has simise square kuyoba okufanayo. Kudingeka ukubala inani nokufakwa edingekayo ukuxhuma kokubili esishintshashintshayo.
Lokucabanga ukuthi ibanga phakathi 23 cm amabhande. Kulokhu, omunye umakad 'phakathi kwabo bayoba ubude 25 cm, kusukela ngamasentimitha amabili ngizoya lwemidlalo. Webs ezinjalo kuleli cala kuyoba 23 e inombolo, ngoba benziwa cell ngayinye ngesikhathi zones empambana ukuqinisa. Ngala idatha, singakwazi uqhubekele ukubala besebenzisa uhlelo.
Nokufakwa for strip isisekelo
Strip isisekelo isetshenziswa lapho emhlabathini hhayi esitebeleni kakhulu eqala ngilimise House kanzima. It is a isisekelo isiqeshana ngokhonkolo ukhonkolo noma kwagcizelela, lapho eqhubeka kuwo wonke azungezwe kwesakhiwo kanye ngaphansi main izindonga umthwalo eziveza. Ukuqinisa isisekelo nalo ikhiqizwa 2 zones, kodwa sibonga imininingwane ye ukuqinisa strip isisekelo phezu ibusa kakhulu kancane futhi, ngenxa yalokho, kuyoba kubiza kancane.
Imigomo layout ukuqinisa mayelana efanayo for the isisekelo setshe. Kuphela izinduku kumele iphele le cm 30-40 kusukela ekhoneni. Futhi jumper ngamunye kufanele ngaso 2-4 cm advocate for the induku kuyo amanga. Ukubalwa Jumpers mpo kwenziwa isimiso esifanayo njengoba kulesi sibalo ubude edingekayo ukuqinisa for setshe izisekelo.
Qaphela ukuthi zombili amacala lokuqala nelesibili valve kumele kuthathwe nge ohlangothini okungenani amaphesenti angu 2-5.
HomeUbukhulu yokhuniUphahla GableAbat-ukuzwakalisaUphahla MansardHop ophahleniWood trussezitebhisini Straight entsanjeniizitebhisi Direct SaddleIzitebhisi nge ° 90Izitebhisi nge swivel 90 °, futhi izinyatheloIzitebhisi ukuvula 180 °Isikhwelo liphenduka by ° 180 kanye nezigaba rotaryIsikhwelo kanye besandla ezintathuIsikhwelo kanye besandla amathathu kanye nezigaba rotaryEzitebhisini CircularMetal izitebhisiMetal ezitebhisini nge amazombe bowstringMetal izitebhisi nge ° 90Metal izitebhisi nge ° 90 futhi amazombe bowstringMetal izitebhisi ngokujika of 180 °Metal izitebhisi liphenduka by 180° and bowstring amazombeIzinyathelo ConcreteStrip isisekeloPier isisekeloBase setsheIzindandatho ConcretePaversIndawo eyimpumputheThe ekubalweni diagonalUkwakheka ngokhonkoloLumberNokufakwaTile CeramicOkwakhiwa ngalo la mabhodiWallpapersUkukhweza ishidi izintometal grillesIzindlu WoodenWall MaterialsFloor MaterialsdeckingStone FenceMetal ezicijileArch for picket kocingoIphansi wathelaCanopiesUsayizi LotPitumthamo kahleDitchTurfThe pool aboncamanepipe ivolumuUmqulu ethanginiUmgqomo ivolumuUmqulu we esitsheni wamaqhuqhuvaInani isihlabathi noma isihlabathi kwenqwabaUkubalwa kwevolumu yomoya ekuholeni komoya umoyaGreenhouseGreenhouse ongaphambili omiseBuilding ngocingoUkukhanyisa ekamelweniWardrobewokubala loan